China Kiwi vagadziri uye vanotengesa | Heritage
Kiwi iChina yakabva kuguta reZhouzhi ine chigadzirwa cheGeographical Indication. Inonziwo Chinese Gooseberry.
Kiwi inozivikanwa pasi rese. Akapfuma mune akasiyana mavitamini uye folic acid, carotene, calcium, lutein, amino acids, yakasikwa inositol, inozivikanwa samambo wemichero.
Heritage Chikafu chakatumira kunze kwenyika makumi maviri nekuda kwemhando yepamusoro uye yakasarudzika kuravira.
Ndeapi mabhenefiti e Akaomeswa Kiwi Chibereko?
Inotapira, yakasviba kiwi inogona kunge isingaite nguva dzose yekuchengetedza kwenguva refu kana kudya uchienda, saka funga yakaomeswa kiwi michero seimwe nzira ine zvakawanda zvakanaka. Ichi chibereko chisina mvura chakaderera mumafuta, zvine mwero yakaderera macalorie uye inopa zvicherwa zvine hutano uye fiber. Inowanzo kuve yakakwira mushuga yakawedzerwa, zvisinei, saka ingoisanganisira muchirongwa chako chekudya kana ukadya chikafu chine shuga shoma.
MaCalori uye Mafuta
1.8-oz. kushumirwa kwemichero yakaomeswa kiwi ine 180 macalorie. Izvi zvakati wandei kupfuura iyo imwechete yekushandira kweiyo nyowani kiwi, iyo ine makumi matatu macalorie. Chikamu cheizvi chinokonzeresa neyakaomeswa michero, iyo inotarisisa macalorie uye zvimwe zvinovaka muviri. Sezvo kiwi yakaomeswa inowanzo kuvharwa mushuga, michero yakaomeswa macalorie zvakare inowedzera shuga. Kunyangwe akawedzera macalorie, kushumirwa kweyakaomeswa kiwi michero isarudzo yakanaka yekumwa; Iyo Diet Channel inoratidza kudya zana kusvika mazana maviri macalorie epakati-ezvikafu zvekudya. Kushanda kwe kiwi yakaomeswa kunosanganisirawo 0.5 g yemafuta, huwandu hwakaderera hunoita kuti chibereko ichi chisina mvura ive sarudzo yakanaka yezvikafu zvine mafuta mashoma.
Michero yakaoma kiwi isarudzo yakanaka yekuwedzera yako iron uye calcium kudya. Kumwe kushumirwa kwechibereko ichi kunopa 4 muzana yecalcium yaunoda zuva rega rega. Iyo calcium mune yakaomeswa kiwi inosimbisa bone density uye simba.
Zvadaro: Yero Peach
Mvura yakasviba Candied Kiwi
Kiwi isina mvura
Mvura yakasviba Kiwi Chips
Mvura yakasviba Kiwi Chibereko
Mvura yakasviba Kiwi Recipe
Yakaomeswa Kiwi Michero Zvimedu
Yakaomeswa Kiwi Recipe
Yakaomeswa Kiwi Zvimedu